Salaamanews » Culimada Soomaaliyeed oo Cadeysay Xukunka Dadka Aflagaadeeyay Nabigeenna Mohamed (NNKH)
Home » Islam, Warar Culimada Soomaaliyeed oo Cadeysay Xukunka Dadka Aflagaadeeyay Nabigeenna Mohamed (NNKH) Print - Daabace: SalaamaNews - Sep 15th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Daawo: Sawirro iyo muuqaal ku saabsan Minnesota oo laga xusay dhalashada nabi Muxamad (NNKH)Muqdisho: Xarakada islaamiga ah ee al-Islaax oo shir ay qabatay dib ugu midowdayMaalinta “Valentine’s Day” Maxay tahay? & Diinta Islaamku ma ogoshahay Maalintaas?Shir diimeed Tansaaniya ka mamnuucay hadallada nacaybka diimaha dhaliyaSoomaalida oo dhalleeceeyay xarigga ay al-Shabaab ee macalimiinta Qur’aanka
(Salaamanews)-Culumaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa cod care leh ku canbaareeyay Filimkii dhawaan ay soo saartay dowladda Mareykanka, kaasoo lagu Aflagaadeeyay Nabi Mohamed Caleyhi Salaatu-wasalaam.
Shiikh Maxamuud ow Cabdulle Cariif oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in reer galbeedka aan looga baran inay danta Islaamka ilaaliyaan, ayna tahay wax waaqici ah in Aflagaaddo loo geysto Diinta iyo nabigeenna Mohamed (NNKH).
Shiikh Maxamuud oo aan taleefanka kula hadlay ayaa iiga warbixiyay sida Diinta Islaamka ay ula dhaqmeyso hadii qof aan islaam aheyn uu ku Tacadiyo Nabi Mohamed NNKH ama Diinta Islaaka, wuxuuna sheegay in Islaamka uu Sharci ka dajiyay arrintaasi isla markaana Maxkamad Islaami ah la soo taagayo qofkii arrintaasi ku dhaqaaqo.
“Ilaahay ayaa quraankiisa ku yiri Yahuud iyo nasaaro Idiinkama raalli noqonayaan ilaa aad Diintooda ka raacdaan, marka gaalada awalba lagama fileyn wanaag ay u sameeyaan Diinta Islaamka” Sidaasi waxaa yiri Shiikh Maxamuud Ow Cabdulle Cariif.
Shiikha ayaa sidoo kale sheegay in arrintaasi aanay aheyn wax ku cusub dhagaha Islaamka, laakiin ay jiraan waxyaabo badan oo dadka Islaamka ah ee Soomaaliyeed iyo kuwa Caalamkaba Fududeeyeen Sida in la yiraahdo Dimuqraadiyad baan u ololeeynayaa, wuxuuna sheegay Shiikhu in arrintaasi ay lamacno tahay in aad dhahdo Kitaabka alleh iyo Axaadiista Nabigeenna ayaan ka doortay wax ay gaaladu soo Abaabuleen.
Shiikh Maxamuud ayaa sidoo kale ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay sameeyaan banaan baxyo waa weyn oo ay ku muujiyaan Shucuurtooda ku aadan sida ay uga Xunyihiin Tacadiga lagula kacayo Diinta Islaamka.
“Gaaladaas hadda qof soo qaban karto ma jirto laakiin diintu waxay qabtaa in la dilo, xadiis soo arooray baa sheegaya nabigeenna qofki Caayo waa ladilayaa” sidaas ayuu yiri Shiikh maxamuud.
Si kastaba ha ahaatee waxaa Shalay illaa iyo Xalay Soomaaliya ka soconayay Dibad baxyo ay dhigayaan Shacabka Soomaaliyeed, oo ay kaga dhiidhinayaan Aflagaaddada Nabi Mohamed NNKH ay u geysteen Muwaadiniin ka soo jeeda Mareykanka.
Tags: islam, warar « Qoraalkii HoreNUSOJ oo Canbaareysay Xarig Wariyeyaal loogu geystay Magaalada Boorama.	Qoraalka Xiga »Ciidamada Huwinta ah oo Qabsaday Deegaanno horleh oo ka tirsan Jubada Hoose	Halkan Hoose ku Jawaab